Shiinaha ahama birta xarig birta ah oo leh warshad nolol dheer leh iyo alaab-qeybiyeyaal. Boegger
Ahama ahama Steel Xadhig mesh
Mashiinka birta ah ee guntin birta ah waxaa laga sameeyaa birta birta ah ee siligga sare ka sameysan ee 304, 316, 304L, 316L. Iyo labada xarig ee waaweyn ee xargaha birta ah waa 7 × 7 iyo 7 × 19, iyo 1 and 7 iyo 1 × 19 ayaa sidoo kale la bixiyaa. Xagalka caadiga ahi waa 90 °. Meshku ma dhaawici karo gacmaha jilicsanaantiisa wanaagsan. Mana dhaawici doonto xayawaanka iyo shimbiraha. Sidaa darteed waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa mesh mesh mesh mesh si loo ilaaliyo xayawaannada, waxayna ka dhigi kartaa martida inay ku raaxaystaan ​​xayawaannada aan khatarta lahayn. Ka sokow, waxaa loo isticmaalaa sida mesh mesh aviary mesh iyo baqashada shimbiraha si shimbiraha loogu noolaado si raaxo leh.
Qaab-dhismeedka Mesh Xadhig
Faahfaahin Xadhig Xadhig
Kala duwanaansho sare
Kala duwanaanshaheena xargaha xargaha xargaha waa kuwo wajiyo badan oo si ballaaran loogu adeegsado dhinacyada soo socda:
Shaashadda dhismaha. Difaaca dhicista.
Dayrarka amniga. Helipad
Shaashadda Qaybta Cagaar cagaaran.
Xerada xayawaanka. Gawaarida gawaarida la dhigto & garaashka.
Qafis xayawaan ah. Qurxinta.
Gali darbiyada balastararada. Dukaan ku habboon, iwm
Amni aad u fiican
Iyada oo dusha sare leh, mesh fiilooyinka la duubay ayaa si wax ku ool ah uga fogaanaya dadka iyo xayawaanka in la xoqo. Intaas waxaa sii dheer, meshkan ayaa ah mid si aad ah u adkaysi u leh, taas macnaheedu waa, waxay ku siin kartaa difaac heer sare ah xayawaannada ku lifaaqan isla markaana yareynaya waxyeelada dhicitaanka.
Ka samaysan bir bir ah oo tayo sare leh oo AISI 304 ama AISI 316 ah, kala duwanaanta xargaha xargaha xargaha ayaa leh dhisme aan la burburin karin oo bixinaya saameyn sare iyo iska caabin jabinta. Waxay leedahay duugnimo aad u fiican iyo iska caabin ilmada, culeys qaadista culeyska sare si ay u qaado barafka culus. Dhanka kale, waxay u adkeysan kartaa calalinta burburka ee jiirka iyo cayayaanka kale.
Godad siman oo rhombic ah ayaa u oggolaanaya daahfurnaan sare oo aan aragga laga horjoogsanayn. Muuqaalkeeda xarrago leh iyo qaab-dhismeedka waara ayaa ka dhigaya mid aad uga mahadceliya naqshadayaasha beerta iyo nashqadeeyayaasha adduunka oo dhan.
Mesh cable mesh waa heer sare u adkaysta cimilada si ay u adkeysan karaan xaaladaha ugu daran sida roobka adag, barafka culus xitaa duufaanka. Waxay sidoo kale leedahay iska caabin sare UV, daxalka iyo miridhku kaas oo u oggolaanaya cimri dheer in ka badan 30 sano. Dhanka kale, kala duwanaanshaheena mesh fiilooyinka ayaa xor ka ah dayactirka iyo nadiifin gaar ah iyo daahan looma baahna.
Ka sokow, xargaha xargaha xargaha ee ay bixiso shirkadeenu waa jawi saaxiibtinimo, aan ololi karin oo dib loo isticmaali karo. Intaa waxaa sii dheer, qaabdhismeedka jilicsan ayaa u oggolaanaya qallooc xagal-bilaash ah oo isku laaban oo loogu talagalay gaadiidka fudud iyo rakibidda.
Sawir mesh mesh xargo
Mashiinka birta ah ee guntin birta ah
Magaca: mesh cable mesh - nooca gunti.
Qalabka fiilada: birta birta ah ee AISI 304, 304L, 316 ama 316L.
Dhismaha Fiilooyinka: 7 × 7 (1.5 mm, 2 mm ama 2.5 mm), 7 × 19 (3 ​​mm, 4 mm)
Dhexroor xarig: 1/8 ", 3/32", 5/64 ", 1/16" iyo 3/64 ".
Cabbirka furitaanka mesh: 1 "× 1", 1-1 / 2 "× 1-1 / 2", 2 "× 2", 3 "× 3" iyo 4 "× 4".
Xagasha mesh caadiga ah: 90 °.
Cabbirka mesh: W: 20 mm ilaa 120 mm; H: 20 mm ilaa 120 mm.
Mesh cable miskaha - 1/8 "fiilo
Xeer Dhexroor xarig Cabirka daloolka Fasax caadi ah
Qaab dhismeedka xargaha
KCM-A76 1/8 " 3.2 mm 3 "3" 76 mm × 76 mm 1600 lbs
Mesh cable miskaha - 5/64 "cable
Fasax caadi ah
KCM-C60 5/64 " 2.0 mm 3 "3" 60 mm × 60 mm 676 lbs
Mesh cable miskaha - 1/16 "cable
KCM-D25 1/16 " 1.6 mm 1 "1" 25.4 mm × 25.4 mm 480 lbs
KCM-D60 1/16 " 1.6 mm 3 "3" 60 mm × 60 mm 480 lbs
Mesh cable miskaha - 3/64 "cable
KCM-E25 3/64 " 1.2 mm 1 "1" 25.4 mm × 25.4 mm 270 lbs
Hore: Ahama Steel Ferrule Xarig mesh leh xoog weyn
Xiga: Muraayadaha Fiilooyinka leh Saamaynta Muuqaalka Muuqaalka ah